Mora mitantana marika marobe mifanaraka amin'ny marika marobe
Ny mpitantana fanofana fialan-tsasatra na mpandraharaha amin'ny serivisy misy servisy manana singa an-jatony na an'arivony, ary koa tompona tranom-bahiny, dia matetika no mila manana marika maro. Ity paikady ity dia mety vokatry ny fivoarana ara-tantara toy ny tranga M&A ao anatin'ny orinasan'izy ireo, na ny filàna mikendry manokana ireo faritra samihafa amin'ny tsena.
Indraindray, ny tsenan'ny fifaninanana dia manery ireo orinasa hanana tetikady marobe. Miasa eo amin'ity tsena ity, matetika dia sarotra ny manome fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny marika tokana. Noho izany, mila mikendry fizarana marketing isan-karazany amin'ny marika maromaro ianao.
Misy ny tombony sy fatiantoka azo avy amin'ny marika marobe. Ny vaovao tsara dia hoe, amin'ny fananana an'ity paikady ity, ny orinasa samihafa dia afaka mifehy ny mpifaninana aminy ary mahatsiaro ho voaro amin'ny tsena. Ny fananana paikady marobe marobe dia azo antoka fa mifehy ny tsena ianao fa tsy ny mpifaninana aminao.
Amin'ny maha tompona orinasa anao dia takatrao tsara ny fotokevitry ny tsy fivadihan'ny marika ary tsy isalasalana fa mampiasa an'io toe-tsaina io amin'ny tetikadinao marika marobe ianao. Zeevou dia fomba manintona sy mora hitazomana an'io ary hamono ny tsena ho an'ny marika manokana anao.
Ny fitazonana ny kaontinao rehetra ao anatin'ny rafitra PMS tokana dia hamonjy anao fotoana sy hery be dia be amin'ny fahafaha-miodina sy miverina fa tsy miditra sy mivoaka amin'ny kaonty misaraka.
Ny fanaovana ekipa vaventy, fizarana logins ary ny fanahiana amin'ny fidirana amin'ny fampahalalana sasany dia mety ho fanamby ihany koa ary mety hiteraka olana ara-piarovana. Miaraka amin'i Zeevou dia azonao atao ny mitazona azy rehetra amin'ny toerana iray ary manome haavon'ny fidirana.
Ahoana no hanampian'ny Zeevou's Multi-brand Solution?
Zeevou's all-in-one Rafitra fitantanana fananana, Channel Manager, Booking Engine / Website Creator, ary Task Management Hub dia mikasa ny hanolotra vahaolana feno ivon-toerana ho an'ny orinasa fandraisam-bahiny marobe toa ny mpitantana fanofana fialan-tsasatra, mpandraharaha amin'ny serivisy misy serivisy, na tompona hotely.
Hainay ny mahasoa azy amin'ny fitantanana marika maromaro. Zava-dehibe koa ny fananana fidirana tokana ahafahanao mitantana fananana manerana ny toerana maro, tanàna, na iraisam-pirenena manerana ny firenena maro. Ankafizinay tanteraka ny maha-zava-dehibe ny fahaizana mihazakazaka marika samy hafa amin'ny fitoviana sy mitantana azy ireo amin'ny alàlan'ny tokan-trano ifampizarana. Araka izany, ny marika marika marobe dia ivon'ny Zeevourafitry ny rafitry ny rafitra. Ity vahaolana ity dia ahafahan'ny mpampiantrano sy orinasa mpitantana fananana mamorona marika tsy voafetra ho an'ny orinasan'izy ireo, mamaritra ny marika default ho an'ny trano tsirairay, ary na dia mivarotra eo anelanelan'ny marika sy rehefa tianao aza.
Noho izany dia hanana tombony bebe kokoa izy ireo ary hampisaraka ny lafiny samihafa amin'ny orinasany hitantanana azy ireo tsirairay nefa amin'ny lafiny iray. Ao amin'ny Zeevou, azonao atao ny mampiasa ny endri-marika marobe mba hananana tombony samihafa amin'ny paikadim-barotra marobe ary hiasa tsara.
Io fampiasa io dia ahafahanao misaraka tranokala famandrihana mivantana miaraka amina motera famandrihana namboarina sy fampandehanana bilaogy ary hiantohana ny traikefa vahiny dia marika feno araka ny marika default.
Zeevou dia hikarakara mailaka mivoaka ary hisintona logo sy fampahalalana mifandraika mifanaraka amin'ny marika marina. Ary koa, ny adiresy mailaka miditra marobe dia azo tantanana mora foana amin'ny alàlan'ny anay boaty mitambatraendrika fampitana mailaka ho avy. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny marika marika marobe natolotr'i Zeevou, dia afaka manana fitaovana tokana ianao hitantanana marika maromaro mifanitsy ary hitazona ny fampahalalana voalaminao tanteraka.
Mifandraisa aminay hananganana a Demo - avelao ny ekipanay hampiseho aminao ny herin'ny Zeevou Multi-Brand anio!